Riyad Mahrez Oo Goolkiisii Xalay U Hibeeyey Mulkiilihii Leicester City Ee Diyaaradda Ku Dhintay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Riyad Mahrez Oo Goolkiisii Xalay U Hibeeyey Mulkiilihii Leicester City Ee Diyaaradda Ku Dhintay
(31-10-2018) Xiddiga kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez ayaa xalay dhaliyey gool uu kooxdiisa ugu soo celiyey hoggaaminta horyaalka Premier League, waxaana markii ay ciyaartu dhamaatay uu ka hadlay mulkiilihii kooxdiisii hore ee Leicester City oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo Sabtidii ka dhacay xayndaabka garoonka King Power Stadium.
Mahrez oo Leicester City u ciyaaray afar sannadood oo u dhexeeyey 2014 illaa 2018, ayaa waxa uu u saftay 179 ciyaarood, waxaana ay xidhiidh dhow lahaayeen ninka dhintay ee Vichai Srivaddhanaprabha
Mahrez oo warbaahinta la hadlay ciyaartaas kaddib ayaa waxa uu sheegay in Vichai Srivaddhanaprabha uu ugu jiray kaalinta aabbihii oo kale sannadihii uu joogay Leicester City, aadna ay ugu adag tahay inuu rumaysto waxa dhacay.
“Waxa uu ahaa aabbahay oo kale, aad iyo aad ayayna iigu adkayd. Boosku aniga waxa uu ii ahaa qof gaar ah. Afar sannadood oo xasuuso badan leh ayaanu wada joognay waxaanu ahaa qof wanaagsan oo qalbi weyn, maqalka warkaaas iyo dhimashadooduna waxa uu igu ahaa wadne istaag iyo naxdin. Anigu waxa aan ka mid ahay qofka dhibban ee Leicester.” Sidaas ayuu yidhi Riyad Mahrez oo u warramay Sky Sports.
“Markii aan goolka dhaliyey gacmaha ayaan cirka u taagay, sababtoo ah wax badan ayuu aniga iyoo Leicester u qabtay, wayna adag tahay innaan ka hadlo isaga” Ayuu raaciyey.
Mahrez oo ku biiray Leicester City sannadkii 2014 ayaa laba sannadood kaddib waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaartoyga ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska, hase yeeshee bishii July ee sannadkan ayaa uu go’aansaday inuu ka tago isagoo ka degay Manchester City.